Olee Otú M Pụrụ Record A PS4 Gameplay N'ihi Ịkekọrịta Online
> Resource> Game> Olee otú Iji Record Video Gameplay On PS4
Ya mere, ị na nụrụ ogologo zuru ezu na ndị ọhụrụ PS4 ike idekọ gị egwuregwu na-arụ ruo a kacha nke 15 nkeji. Mgbe ahụ, ị nwere nhọrọ ma ịkọrọ ya online ma ọ bụ ohuru ya ndụ. Ọ bụrụ na ị na-agbalị a n'ihu na-adịghị n'aka otú ime ya, nanị na-eso m site; Option 1: Site Share Button ma ọ bụ; Option 2: ọzọ nhọrọ.
The ndekọ nke gị vidiyo ma ọ bụ gameplay na-mere na akpaka ndabere ebe ị na-akpọ. Ọ ga-fọrọ bee-anya site n'oge ị pịa na Share button na video clip uche mejupụtara gị gameplay si n'elu ya na aga na-eme ka elu 15 nkeji na ngụkọta.
Nhọrọ 1: Share Button
Nhọrọ 2: ọzọ nhọrọ
Ị nwere ike ugbu mfe bulite gị dere videos (ie egwuregwu ejije) na a mfe click na PS4 si DualShock 4 njikwa si ​​Share bọtịnụ. The Share button anọdụ nri na n'elu-ekpe nke njikwa dị ka circled na screenshot n'okpuru. Mgbe ahụ, ị ga-abanye na Share si interface dị ka e gosiri Nzọụkwụ 1.
Rịba ama: Iji ịgbanwe ntọala nke Share button na gị njikwa, ị ga mkpa ka ịnweta Share Ntọala si Share si interface.
1 Ịkekọrịta Nhọrọ
Ị nwere nhọrọ bulite gị PS4 dere gameplay si video jidesie Facebook (Nzọụkwụ 2) ma ọ bụ ohuru ya Ndụ (Nzọụkwụ 3) na ma Ustream ma ọ bụ tuwichi. N'ụzọ dị mwute, na-ebugote na na YouTube si n'elu ikpo okwu a ugbu a anaghị akwado. Otú ọ dị, atụmatụ ahụ nwere ike iwere echiche ma ọ bụ kwukwara n'ime n'ọdịnihu upgrades.
2 Bulite jidesie Facebook
Họrọ Bulite Video Clip maka ebugote gị PS4 dere gameplay si video jidesie Facebook. Mgbe ahụ, họrọ akpan akpan video clip na ị chọrọ ikere òkè. Mgbe ahụ, na-ahọrọ ma dezie ya n'ihu Ịkekọrịta ma ọ bụ ịhụchalụ gị dere video. Nanị Aha gị video clip na mgbe ahụ pịnye gị ikwu na kọlụm nyere. Ozugbo ị na-mere, dị nnọọ pịa Share!
3 Iji Broadcast Gameplay
N'oge, i nwere ike mfe ohuru gị PS4 gameplay bi ma na gị Ustream ma ọ bụ tuwichi akaụntụ (ọ bụrụ na ị nwere ihe na akaụntụ, Nanị na-eso na ihuenyo ji ndu ka onye elu). Ị ga-ego na igbe meekwara gị ikike iji PS4 tupu oge eruo. Na n'elu nke, ị nwekwara ike biputere a njikọ gị FB akaụntụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ itinye aka na a ezigbo oge mkparịta ụka, e nwere bụ nhọrọ maka egosipụta gị ikwu na ihuenyo na Nsonye nke a okwu. Dị nnọọ a nta chetaara na ma mmasị bụ Nhọrọ.
Ndị ọzọ karịa ekere òkè gị PS4 dere video jidesie Facebook, ị pụrụ ịkọrọ gị brilliantly egwuri egwuregwu jidesie ndị ọzọ na nyiwe ka nke ọma, dị ka YouTube. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, ị kwesịrị iji tọghata ma ọ bụ mpikota onu ala nna gị PS4 si dere videos n'ime a faịlụ ụdị nke ahụ bụ dakọtara maka ebugote jidesie YouTube. Ị nwere ike ma tọghata gị vides online ma ọ bụ na-anọghị n'ịntanetị.
Ọ bụ a ọzọ kpọmkwem na n'ụzọ kwụ ọtọ usoro iji tọghata ma ọ bụ mpikota onu gị faịlụ online. Nanị ego ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla nke na-atụ aro online Ntụgharị 's ezi ezuru gị. Ọsọ nke akakabarede ike dịgasị dị ka gị njikọ Ịntanetị
-Anọghị n'ịntanetị Nchigharị
Alternatively, na-aga site Atụmatụ na otú i nwere ike ikpebi na Right video Ntụgharị n'ihi na gị video mkpa. Ọtụtụ n'ime ha na-enye a dịgasị iche iche nke faịlụ na ụdị nke ahụ bụ ike iji tọghata gị dere videos nke mere na ọ bụ adabara YouTube si na-ebugote.
Ebe PlayStation 4 N'ihi Christmas?
Olee otú Play MKV on PS3
Enwe ekwentị gị na kọmputa gị
Top 20 Android Racing Games I Kwesịrị Gbalịa